Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 02:33
2 238 octets ajoutés , il y a 1 an
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 01:44 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 17 Septambra 2019 à 02:33 (hanova) (esory)
Ireto avy ireo anaram-bintana amin'ny fanandroana malagasy izay sady anaran'ny volana malagasy koa: [[Alahamady]], [[Adaoro]], [[Adizaoza]], [[Asorotany]], [[Alahasaty]], [[Asombola]], [[Adimizana]], [[Alakarabo]], [[Alakaosy]], [[Adijady]], [[Adalo]] ary [[Alohotsy]]. Mbola iadian-kevitra ny fotoana mifanandrify amin'ny volana tsirairay noho ny fahasamihafam-piheverana misy eo amin'ireo milaza tena fa manam-pahaizana momba ny [[tetiandro malagasy]].
=== Fanamarihana mialoha ===
==== Ny fifandraisan'ny vintana roa ambin'ny folo ====
Ny vintana roa mialoha sy manaraka ny renivintana iray dia zanabintan'ity renivintana ity, ka ilay mialoha azy dia lazaina fa babeny ary ilay manaraka azy dia atao hoe trotroiny. Ny vintana iray eo amin'ny zoron-trano na lafin-trano iray sy ny vintana iray hafa izay eo amin'ny zoron-trano na lafin-trano mifanatrika amin'io (manome zoro 180°) dia lazaina hoe mifandratra. Tsy maintsy renivintana no mifandratra amin'ny renivintana. Ny renivintana iray dia mitanila na miarina eo amin'ny zanabintana roan'ny renivintana mifandratra aminy. Ny zanabintana iray dia mitanila na miarina eo amin'ny renivintana mifandratra amin'ny renivintana mibaby na mitrotro azy. Ny zanabintana trotroina dia tsy maintsy mifandratra amin'ny zanabintana trotroina, ary ny zanabintana babena dia tsy maintsy mifandratra amin'ny zanabintana babena.
Mitondra tonon'andro telo izay antsoina hoe "vava" (na "vavany") sy "vonto" ("vontony") ary "vody" (na "vodiny") ny renivintana, fa tsy mitodra afa-tsy tonon'andro roa atao hoe "vavany" sy "vodiny" ny zanabintana. Ao anatin'ny iray volana dia mifanarakaraka araka ny filaharany ny vintana ka ny vavan'ny vintana mitovy anarana amin'ny [[Volana (fotoana)|volana]] diavina no anombohana (ohatra, vava Alahamady); andro ahatsinanan'ny [[Volana]] izany. Tsy isaina ho andro voalohany ny andro iray raha tsy tsinana amin'ny marain'io andro io ny Volana. Ny ao anatin'ny iray volana malagasy anefa dia mety misy 28 hatramin'ny 30 andro. Raha misy 28 andro ny iray volana dia mifarana amin'ny vodin'ny vintana mitovy anarana amin'ny volana eo aloha ny volana diavina (ohatra, vody Alohotsy, raha ny volana Alahamady no diavina). Raha tsy tsinana ny Volana amin'ny marainan'ny faha-29 andro dia lasa misy 29 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vavan'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io (ohatra, vava Alahamady). Fa raha mbola tsy tsinana ihany ny Volana ami'ny faha-30 andro dia misy 30 andro ny iray volana ka mifarana amin'ny vodiny na ny vonton'ny vintana mitovy anarana aminy io volana diavina io, ka vodiny raha zanabintana fa vontony raha renivintana.
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/974859"